ထိုင်းနိုင်ငံက ပြည်တွင်းထုတ် COVID-19 ကာကွယ်ဆေး လူသားဖြင့်စမ်းသပ်မှု စတင် - Xinhua News Agency
ထိုင်းနိုင်ငံက ပြည်တွင်းထုတ် COVID-19 ကာကွယ်ဆေး လူသားဖြင့်စမ်းသပ်မှု စတင်
ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်မြို့၌ မေ ၁၃ ရက်တွင် COVID-19 ရောဂါအတွက် Swab စစ်ဆေးမှု ခံယူနေသူများအား တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
ဘန်ကောက် ၊ ဇွန် ၁၅ ရက်(ဆင်ဟွာ)
ထိုင်းနိုင်ငံက ပြည်တွင်းထုတ် COVID-19 ကာကွယ်ဆေးကို လူသားများဖြင့် လက်တွေ့စမ်းသပ်မှု စတင်လိုက်ပြီးဖြစ်ကြောင်း ချူလာလောင်ကွန်းတက္ကသိုလ်မှ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ပါမောက္ခ Kiat Ruxrungtham က ပြောကြားခဲ့သည်။
အသက် ၁၈ နှစ်နှင့် ၇၅ နှစ်ကြားအရွယ်ရှိ စေတနာ့ဝန်ထမ်း ၇၂ ဦးအား လူ့ခန္ဓာကိုယ်တွင်း ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ခုခံအားစနစ် တည်ဆောက်ရန် စီမံဖော်စပ်ထားသည့် ChulaCov19 ကာကွယ်ဆေး လက်တွေ့စမ်းသပ်မှု ပထမအဆင့် ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း ချူလာလောင်ကွန်းတက္ကသိုလ် ဆေးပညာဌာန ကာကွယ်ဆေးသုတေသနစင်တာ ညွှန်ကြားရေးမှူးက ဇွန် ၁၄ ရက်တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
အခြားစေတနာ့ဝန်ထမ်း ၁၅၀ ဦး မှ ၃၀၀ ဦးထိကိုလည်း လာမည့် ဩဂုတ်လတွင် ChulaCov19 ကာကွယ်ဆေး လက်တွေ့စမ်းသပ်မှု ဒုတိယအဆင့် ပြုလုပ်ရန် ရှိနေသေးကြောင်း ၊ အစောပိုင်းတွင် ကြွက်ငယ် ၊ မျောက်များ နှင့် စမ်းသပ်ခဲ့ပြီး လက်သင့်ခံနိုင်သောရလဒ်များ ရရှိခဲ့ကြောင်း ၎င်းက ဆိုသည်။
အကယ်၍ ChulaCov19 ကာကွယ်ဆေးသည် လူသားများတွင် ကိုယ်ခံအားစနစ် ပေါ်ထွက်လာသည်ကို နောက်ဆုံး၌ သက်သေပြနိုင်ငံပါက လူများအသုံးပြုရန်အတွက် ပမာဏများပြားစွာ ထုတ်လုပ်လုပ်ခြင်းကို လာမည့်နှစ်လယ်တွင် စတင်နိုင်မည် ဖြစ်ကြောင်း ပါမောက္ခ Kiat က ပြောကြားခဲ့သည်။
ထိုင်းနိုင်ငံ၌ ဇွန် ၁၄ ရက်တွင် COVID-19 လူနာသစ် ၃,၃၅၅ ဦး နှင့် သေဆုံးသူ ၁၇ ရှိပြီး အတည်ပြုလူနာစုစုပေါင်း ၁၉၉,၂၆၄ ဦးထိ နှင့် သေဆုံးသူ စုစုပေါင်း ၁,၄၆၆ ဦးထိ ရှိလာခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
BANGKOK, June 15 (Xinhua) — Thailand has begun to conductaclinical test on its locally developed COVID-19 vaccine with humans, Chulalongkorn University’s medical professor Kiat Ruxrungtham said.
The director of the Vaccine Research Center of Chulalongkorn University’s Medicine Department, said on Monday that 72 volunteers, aged between 18 and 75 years old, have undergone the first phase of the clinical test on the ChulaCov19 vaccine, designed to build the human body’s immunity to the coronavirus.
Another 150 to 300 volunteers were yet to follow suit inasecond phase of the clinical test, scheduled for August, on the ChulaCov19 vaccine, which had been earlier tested with mice and macaques and satisfactory results had been reported, he said.
If the ChulaCov19 vaccine is finally proven as capable of inducing such immunity in humans, its manufacturing inaquantitative volume for use with people might probably get started by the middle of next year, he said.
Thailand reported 3,355 new cases on Monday, raising the total case tally to 199,264. The total death toll increased by 17 to 1,466. Enditem
1.People take the swab test for COVID-19 in Bangkok, Thailand, May 13, 2021. (Xinhua/Rachen Sageamsak)
တရုတ် တစ်နိုင်ငံလုံးတွင် ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေး သန်း(၉၀၀)ကျော် ထိုးနှံပြီးဖြစ်